Bus any Thailandy ~ Journey-Assist - tapakila, vidiny, làlana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Transport. For rent. » Bus any Thailand
Bus any Thailand
Ny fiara fitateram-bahoaka angamba no fiara fitateram-bahoaka lafo indrindra any Thailand. Mandritra ny fotoana toa azy ireo dia azo tratrarina saika hatraiza hatraiza eto amin'ity firenena ity.
Ireo fiara fitateram-bahoaka
Ireo fiara fitaterana tsy tapaka
Làlana malaza + vidiny
Karoka ary mividy tapakila tapakila an-tserasera
Orinasa fitateram-bahoaka any Thailand
Ireo fiara fitateram-bahoaka any Thailand
Matetika ireo dia bus kely an'ny orinasa tsy miankina. ply ny lalana eo anelanelan'ny tanànan'ny mpizahatany malaza. Ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka toa izany dia azo vidina any amin'ny masoivoho fitetezam-paritany sy orinasa mpitatitra olona. Mazava ho azy fa lafo kely kokoa noho izy ireo izy ireo raha oharina amin'ny làlana mitovy amin'ny fiara fitateram-bahoaka mahazatra. Mora izy ireo satria ny toerana fialana sy fahatongavana dia any amin'ireo faritra mpizahatany, ary tsy any amin'ny gara mpandeha, izay mbola tokony ho tratra. Matetika ny vidin'ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka toy izany dia misy ny famindrana avy any amin'ny hotely mankany amin'ny toerana hanombohan'ny lalana. Ny haavon'ny fahazoana aina amin'ny fiara fitateram-bahoaka tahaka izany dia avo kokoa noho ny amin'ny fiara fitateram-bahoaka mahazatra, saingy kosa mila tadidinao fa tsy manana fonosana feno feno izy ireo, ka raha toa ianao ka misy kitapo marobe dia tokony hifidy fiara fitaterana mahazatra ianao.
Ny fahavoazan'izy ireo lehibe dia ny tsy fisian'ny fahafaham-po feno. Ho azy ireo, ny fomba fanao dia ny mamela iray ora na roa aorian'izay, ka raha manana lalana sarotra ianao amin'ny famindrana, dia, raha tsy izany, raha mandry adiny iray fanampiny amin'ny fiara fitaterana toy izany. Ary aza mino fa ny fotoana hahatongavana dia mividy rehefa mividy tapakila. Satria io dia fivarotana varotra mba hamitahana mpanjifa. Nefa na dia miala ara-potoana aza ny fiara fitaterana, saika ho avy tsy ho ela noho ny nampanantenaina, satria eny an-dàlana dia hialany amin'ny làlana araka ny "raharahany manokana" :). Ohatra, raha te-hiompy na hanangona entana amin'ny lalana.
Amin'ny ankapobeny, raha kritika aminao ny misambotra fiaran-dalamby na amin'ny seranam-piaramanidina, dia tsara kokoa ny tsy manisa io karazana fitaterana io.
Ireo fiara fitateram-bahoaka matetika ao Thailand
Raha liana amin'ny bisy be sy tsy mahazo aina ianao, dia mety tokoa ny fiara fitateram-bahoaka Thailandey :). Ampiasaina mavitrika ireo mponina eo an-toerana. Ary io no fomba mora indrindra mivezivezy manerana ny firenena. Ary afaka miditra amin'ireo bus ianao saika aiza na aiza.
Ny tsy fatiantoka dia ny fahazoan-dàlana sasany ananany ary ny zava-misy dia eo anelanelan'ny gara fitaterana fiara izay matetika tsy lavitra ny toerana fizahan-tany. Fa ny tsy fangaron'izy ireo dia ny famoaham-pinoana. Miala ara-potoana foana izy ireo ary tonga amin'ny fomba mitovy foana. Ny mety hisintona fanemorana dia ambany be.
Ny lalana sy ny vidiny malaza indrindra
Bangkok - Chiang Mai (500-900 baht)
Bangkok - Phuket (650-1100)
Bangkok - Samui (Surat Thani, Donsak) (500-900)
Bangkok - Pattaya (120-150)
Pattaya - Hua Hin (120-150)
Bangkok - Nong Khai (500-800)
Fividianana tapakila fitateram-bahoaka an-tserasera
Mampalahelo fa amin'izao fotoana izao (martsa 20202) dia tsy misy varavarankely an-tserasera iray raha mividy tapakila bus. Noho izany, misy safidy roa:
Ny voalohany dia ny fampiasana 12G aggregator, izay manampahaizana manokana amin'ny fivarotana tapakila ho an'ny maody fitaterana olona rehetra any Azia. Ny endrika fikarohana sy fividianana hitanao eto ambany.
Ny safidy faharoa - ao amin'ny andiany manaraka dia manolotra lisitr'ireo saika orinasa rehetra any Thailand ianao. Ny tranonkalan'izy ireo dia aseho ihany koa, amin'ny maro amin'iny no ahafahanao mahita ny fandaharam-potoana, jereo ny vidiny ary mandritra izany fotoana izany dia mahita ny fomba hividianana tapakila.
Powered by 12Go Asia rafitra
Orinasa fitateram-bahoaka any Thailand.
Transport Co Ltd.
Ny mpitondra entana lehibe indrindra any Thailand. Lalana amin'ny lalana rehetra. Naseho an'ireo fiara fitateram-bahoaka isan-karazany. Ny tapakila dia azo amidy amin'ny biraon'ny boaty ihany.
Serivisy serivisy fitsangantsanganana
Fitaterana vondrona sy mpandeha tsirairay. Ny làlana lehibe, Pattaya, Bangkok (anisan'izany ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi), Hua Hin.
Mpanazatra amin'ny Roong reuang
Orinasa lehibe. Ny lalana lehibe dia mitovy amin'ny orinasa teo aloha: Bangkok (seranam-piaramanidina), Pattaya, Hua Hin.
Manome ny làlan'ny nosin'i Koh Samui, Koh Phangan ary Koh Tao.
Mpitondra entana lehibe manatrika ny faritra avaratra: Chiang Mai sy Chiang Rai.
Manompo ny toerana avaratra: Chiang Mai, Nan (Nan), Chiang Khong (Chiangkong), ary koa ny lalana mankany Suratthani (Suratthani).
Mpiara mitondra Roong Reuang mpanazatra. Manompoa antsinanana, avaratra sy atsimo. Mandeha ny fiara fitateram-bahoaka avy amin'ireo gara ofisialy.
Iray amin'ireo mpitatitra tranainy indrindra any Thailandy miaraka amin'ny jeografika be dia be ny fitsangatsanganana. Manompo ny lalana avaratra, atsinanana ary atsimo. Ny fitaterana fitaterana dia tanterahina avy amin'ireo gara ofisialy.
Fiara lehibe iray hafa mitondra ny lalana avaratra sy avaratra-atsinanana. Ny fandefasana fitaterana dia vita amin'ny gara ofisialy.
Serves Provins: Bangkok, Bueng Kan, Chonburi, Chumphon, Kalasin, Khon Kaen, Loie, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Nonthaburi, Phetchabi Pra, Aythat Prai Ayap Khan, Rayong, Roi Et, Sakon Nakhon, Saraburi, Surat Thani, Udon Thani ary Yasothon
Mpanome serivisy Pattaya minivan mpiasan'ny serivisy fantatra, any amin'ny faritra: Koh Chang, Koh Samed, Koh Kood ary Trat.
Ny mpitatitra dia manompo ny lalana avaratra: Chiang Mai, Chiang Rai, Sukhothai, Nan
Manompo ireo faritra avaratry ny firenena
Fiara lehibe iray mitondra ny afovoany, atsinanan'ny firenena sy ny lalana avaratra ao Thailand. Disembarkation - ny mpandeha mpandeha dia tanterahina any amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka ofisialy.
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Thailand
Utapao Airport (U-Tapao), Pattaya
Seranam-piaramanidina Surat Thani (Seranam-piaramanidina Surat Thani), Surat Thani
Don Muang Airport (Seranam-piaramanidina Don Mueang), Bangkok
Seranam-piaramanidina Suvanaphumi (BKK - Suvarnabhumi), Bangkok
Samui Airport (Seranam-piaramanidina Samui), Samui
Phuket Airport (Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket), Phuket
Krabi Airport (Seranam-piaramanidina Krabi - KBV), Krabi
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 3